India: Obama bemanadala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2010 22:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 한국어, Nederlands, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Any India, anisan'ny firenena teteziny any amin'ny faritra maharitra folo andro any Azia, amin'izao fotoana izao ny filoha Amerikana [Etazonia] Barack Obama ary nahaliana ny olona 1,2 lavitrisa ao amin'ity firenena ity izany. Voatantaran'ny fampahalalam-baovao Karana Indiana avokoa ny fihetsika kely ataon'i Obama any India ary dia miresaka momba izany ihany koa ny mpiserasera Karana Indiana. Hanna Ingber Win, izay mpanoratra ho an'ny Global Post avy ao Bombay, no nipika ny fientanentanan'ny Karana Indiana:
Sora-baventy fampandrosoana ao amin'ny Ivokolontsaina Amerikana ao New Delhi. Saripika ambasadin'i Etazonia ao New Delhi. CC BY-ND
“Ala, ala, ala,” (Tonga, tonga, tonga) hoy ilay kilongalahy kely tamin'ny fiteny Marathi, tenim-paritra avy ao Bombay.
Toerana iray hafa, olona anjatony no mifanosika sy mitsambikimbikina mba hahataza-maso indray mitopy ny filoha nandritra ny fotoana nandaozany ny Mani Bhavan, mozea nonenan'ny Mahatma Gandhi fony izy nitsidika an'i Bombay nandritra ny hetsika hahazoana ny fahaleovantenan'i India. Ny anti-dahy mihilana mihoatra ny arofanin'ny lavarangan'ny tranony; Ny kilongalahy mihani-kazo; ny kilongavavy atao antsangory — ny rehetra samy mamoaka ny findainy avokoa, vonona hipika ny sarin'i Obama. Vantany vao tafavoaka ny filoha dia tsy hay notohaina intsony ny olona mihoraka sy mihiaka ary mitehaka.
Greatbong ao amin'ny Random Thoughts Of A Demented Mind no mitantara ny fomba fikarakarana an-dry Obama [mivady] rehefa tonga tany India:
Ny fotoana hivahiniana filoha Amerikana iray aty amintsika dia niverina indray ny fahazarana Pavloviana fanaontsika miankohoka amin'ny tany. Esorina ny voanio fandrao milatsaka eny an-dohan'ny voahosotra. Otra Karana manokana [spesialy] ho azy sy ny vadiny. Misy ny fanononana anarantsakafo hanomezam-boninahitra azy. Na dia ny olona ambony sy ny manankatao aza dia miankohoka eny amin'izay andalovany. Lanilany foana tahaka ny rano ny volam-panjakana ka ny olom-pirenena tsotra no matiantoka ho fikarakarana AZY.
Fanontaniana avy amin'ilay mpanadihady sady mpamaham-bolongana Varun Dixit “Nahoana no tonga eto India i Barack Obama” ka milaza ny heviny:
Miezaka ny hitondra [tolotr’] asa hiverina any Etazonia, izay tsy nahombiazany sy itokisako fa tsy hahombiazany rahampitso koa, i Obama. Fantatr'i Wall Street fa hahazoany tombony ny manangana fandraharahana any India ao anatin'ny tanjona lavitr'ezaka ka manao ny fanaon'ny mpanao politika fotsiny i Obama mampanantena zavatra tsy ho tontosany amin'ny Amerikana.
Liana amin'izay hevitr'Atoa Obama momba an'i Pakistan ihany koa ny Karana Indianas ka somary gaga ihany tamin'ny kabariny araka izay hanazavan’ i Ghulam Muhammed avy any Bombay azy:
Hoy izy (Obama), ho amin'ny tombotsoan'i India lehibe indrindra raha mba mpifanoloborindrina milamina sy mitombina i Pakistan, amin'izay voaantoka sy miakatra milamina ny fandrosoan'i India sy ny fitombon'ny harinkareny faobe sy ny hareny. Nanjakan'ny fanoherana ny teniny avokoa ny fampahalalam-baovao miteny anglisy rehetra raha mbola teo am-pikabariana izy. Na ny Hawks na ny solontenan'ny Times of India any Washington dia mihaino azy ho toy ny fanekena ny haitraitran'i Pakistan [chantage].
Karazandrazan'ny lasa marina avy amin'io kabariny io ny kivazivazy mampihomehin'i Khamba ao amin'ny “Zavatra tsy holazain'i Obama na oviana na oviana any India “.
Takelaka famazivaziana ny fitsidihan'i Obama. Sary tao amin'ny Twitpic an'i rushikeshgk
Toy izao ny hevitry ny mpampiasa Twitter Karana Indiana:
aasthabiyani16: @ArjunKP Word! Marary amin'ilay Obama Obama ary Obama ihany, Raama ô avy avoty amin'ity tantara ity aho, diso ity rima ity :p
hopfans: Fioo!! Manantena fa efa natory izay i Barack Obama. Tena tadio mihitsy no nandraisan'i India ny filohan'i Etazonia… http://goo.gl/fb/hmKIO
jhunjhunwala: Fa nahoana ny fampitam-baovao Indiana no miara-taitaitra amin'i Obama? Kuch bolo bhai (azafady mba milazà zavatra).
Greatbong mitsikera amin'ny firohotana amin'i Obama ka manolo-kevitra:
Tokony horaisintsika tahaka ny fitsidihana filoham-pirenena hafa ny fikarakarana an'i Obama fa tsy hihevitra ny fitsidihana ho mari-panajan'i Etazonia an'i India. Satria tsy izany izy io. Tsy amin'ny fitondran'i Obama mihitsy.